महरा दोषी देखिंदैछन् !! - Aarati Patrika
Home » Featured » महरा दोषी देखिंदैछन् !!
in Featured, News 2019-10-30	0 36 Views
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा आफ्नै पारिवारिक मित्र रोशनी शाहीलाई बलात्कारको आरोप लागेर प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ । मुद्दाको छानविन सकिएको र अब अदालतमा मुद्दा पेश गरिने एवं ५ वर्षको जेल सजाय माग भएको अखबारीखेती पनि बजारमा छ ।
आफ्नो विवाहपूर्वदेखि कै अभिन्न मित्र रहनुभएका महराजीलाई आज २८ वर्षपछि आएर ‘बलात्कार’को दोष लगाउने रोशनी शाहीको क्रियाकलाप मानसिक ‘टेन्सन’ थियो वा बार्गेनिङ पूरा नहुँदाको परिणति हो खोजीको विषय त बन्छ नै– तर यो घटनाले यति प्रचार पायो कि अब महराजीले अदालतबाट सफाइ नै पाए पनि आम नेपालीको नजरबाट सम्मान पाउन चाहीं मुश्किल नै हुने भएको छ । साथै पार्टी ‘इमेज’ को मूल प्रश्नः रोशनी शाही वा महराजी सम्बद्ध प्रमाण संकलनयुक्त प्रहरी प्रतिवेदन शत प्रतिशत झुटो बन्न चाहीं नसकिने नै भएको खबर छ । हाम्रा सम्वाददाताबाट
Previous: अमेरिकाको चेत खुल्यो – अब दिल्लीको आँखा कहिले खुल्ला गम्भीर प्रश्न !!